Mitaky Ny Rariny Ilay Olona Niharan’ny Herisetran’ny Mpitandro Filaminana Sady Miatrika Fanehoan-kevitra Manavakava-bolonkoditra Ao Amin’ny Media Sosialy Tao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Mitaky Ny Rariny Ilay Olona Niharan'ny Herisetran'ny Mpitandro Filaminana Sady Miatrika Fanehoan-kevitra Manavakava-bolonkoditra Ao Amin'ny Media Sosialy Tao Myanmar
Voadika ny 05 Febroary 2018 7:08 GMT
Ny tobin'ny polisy ao Kyaukdata any Yangon, Myanmar. Sary avy amin'ny Google Map Streetview.
Miatrika ny tsikera antserasera sy ny rafi-pitsarana ny lehilahy iray tao Myanmar rehefa avy nitatitra fa nosamborin'ny mpitandro filaminana tamin'ny fomba tsy ara-drariny izy.
Tao amin'ny kaontiny Facebook, ity tovolahy ity dia nanoritsoritra ny fomba nisamboran'ireo andian-dehilahy manao akanjo sivily azy – izay nilaza azy ireo ho polisy – raha teny an-dàlana nampiasa ny findainy izy tamin'ny alin'ny 18 Janoary.
Taitra tamin'ny zava-nitranga , nandositra tao amin'ny hotely iray teo akaiky teo nangataka fanampiana ilay lehilahy. Tsy nety nanampy azy ireo mpiasa tao amin'ilay hotely ary nanolotra azy ho an'ireo polisy, izay nitondra azy tany amin'ny paositry ny polisy avy eo. Nilaza ilay lehilahy fa nihoa-pefy ara-bakiteny tsotra izao sy nikasi-tanana ireo polisy nanao fanamiana sivily raha teny an-dalana ho any amin'ny paositry ny polisy izy ireo.
[Rehefa nisambotra ahy izy ireo dia nanontaniako ] “Raha polisy ianareo, manana taratasy mazava milaza ny fisamborana ahy ve ianareo? Inona no antony hisamboranareo ahy ? “[…]
Hoy izy ireo: “Polisy izahay, tsy misy taratasy aty aminay” ary samy nidaroka ahy avokoa izy 6 sy nanosika ahy ho any aorian'ny fiara.
Navotsotra izy tamin'io alina io ihany rehefa tonga tao amin'ny paositry ny polisy ny rainy. Nanoratra momba ny zavatra niananay tao amin'ny pejiny Facebook izy herinandro taorian'ny namotsorana azy.
Vetivety dia nalaza haingana ny tantara, nahazo zara miisa arivo mahery tao anatin'ny alina iray monja, sy notaterina tamin'ny fampahalalam- baovao mahazatra taorian'izay. Tao amin'ny lahatsorany tamin'ny 26 Janoary, nitantara indray ny zavatra niainany ilay lehilahy ary nanazava ny antony tsy maintsy namoahany izany tao amin'ny media sosialy:
Ny ampitson'iny, nandeha tany amin'ny polisin'ny faritra aho mba hitatitra ity tranga ity ary nangataka azy ireo handray andraikitra [manoloana ireo mpitandro ny filaminana niakanjo sivily ] noho ny fandrahonana, ny famonoana tsy ara-drariny, ary ny fisamborana ny olom-pirenena tsy manan-tsiny nefa tsy misy taratasy fanamarinana. Na dia nampanantena aza ilay manampahefanan'ny polisy tao amin'ny faritra fa hijery momba ilay olana dia tsy mbola nisy ny fepetra noraisina hatramin'izao.
Mpisera Facebook maro no niray hina tamin'ity fisamborana tsy ara-dalàna olom-pirenena ity ary naneho ny fanohanany.
Nampahatsiahy ny andininy voalazan'ny lalàm-panorenana izay miantoka ny zo hiarovana sy ny tsiambaratelon'ny olom-pirenena ny mpikatroka iray:
Afaka sy tsy manana ahiahy ve isika ankehitriny? Manana fiarovana ve isika izao? Moa ve voaaro ny zontsika hanana fiainana manokana sy ny zo amin'ny fiarovan-tena manokana?
Ao amin'ny ” Lalàna momba ny Fiarovana ny Olom-pirenena amin'ny Fiainany Manokana sy ny Fiarovan-tenany Manokana ” izay nosoratana tamin'ny 8 Martsa 2017, dia misy fizarana roa [izay miaro ny raharahan'ity lehilahy ity]. Vakio eto ambany
Nomarihin'i Thaw Htet fa tsy nanao fanamiana ny polisy:
Tahaka ny hoe tsy polisy ireo polisy Birmana fa jiolahim-boto izay midaroka olona tsy misy antony. Tsy mahagaga izany.
Taorian'ny niparitahan'ny tantara, nanda ny fiampangàna azy ny pejy Facebook-n'ny paositry ny mpitandro ny filaminana ary nanizingizina mihitsy aza fa noforonina ilay tranga sy ny ratra nahazo ity olona ity. Nilaza ny mari-panondroana manokana momba ity nanao fitarainana ity ihany koa izy ireo ary nanambara fa Islamo ny finoany, zavatra izay tsy misy ifandraisany tamin'ny zava-nitranga, saingy mety haharesy kokoa ilay lehilahy, ​​noho ny fifandonana ara-pivavahana ao amin'ny firenena. Nofafana ny lahatsoratra taoriana kelin'izay.
Pikantsary avy amin'ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny pejy Facebook-n'ny paositry ny polisy tao Kyauktada izay nofafana tatỳ aoriana.
Nanotany ny maha-zava-dehibe ny fitanisana ny fivavahan'ity nanao fitarainana ity i Myat Thu:
Rehefa namoaka ny fanambarana nanazava ny toe-draharaha ny Paositry ny Polisy tao Kyaukdata, nahoana izy ireo no tsy maintsy nilaza ny hoe ‘Islamo’ tao amin'ny fanambarany? Nosamborin'izy ireo izy ary nodarohany raha teo am-pampiasana ny findainy teny an-dalana tamin'ny alina. Ary raha araka ny reko, dia nanontany izy ireo raha toa ka ‘kalar’ na olom-pirenena ao Myanmar izy rehefa nosamborina .
[Azontsika] atao ve ny miantso izany ho Heloka avy amin'ny Fankahalana?
Teny fanambaniana ny teny hoe “kalar“, izay matetika ampiasaina hanondroana ny olona manana fiaviana avy any India Atsinanana amin'ny fomba manavakava-bolokoditra. Tato anatin'ny taona vitsy lasa izay, nampiasa izany teny izany ireo nasionalista sy ireo mpivavaka hiringiriny rehefa hamely ny Miozolomana ao Myanmar, indrindra fa ny vondron'olona Rohingya vitsy an'isa any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny firenena. Tsy eken'ny governemanta ho vondrom-poko vitsy an'isa ireo Miozolomana Rohingya teraka tao Myanmar ary tsy ankatoavina ho olom-pirenena ao amin'ny firenena mihitsy noho izany na dia eo aza ny toerana nahaterahany.
Na dia nisy aza ny fanehoan-kevitra marobe nanakiana ny fihetsik'ireo polisy sy ny tsy fahombiazan'izy ireo tamin'ny fitondrana ny nahavanon-doza ho any amin'ny fitsarana dia nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra manavakava-bolokoditra tao amin'ny lahatsorany.
Rehefa lasa nalaza be ilay tantara, ny fanehoan-kevitra feno fankahalàna nanafika ilay nanao fitarainana noho ny endri-piaviany, ny volokodiny, ary ny mari-panondroana azy ara-poko no lasa nanjary nalaza kokoa noho ilay olana voalohany tamin'ny herisetran'ny mpitandro filaminana.
Lasa mampiahiahy ny kabarim-pankahalàna ao amin'ny media sosialy mikendry ireo vitsy an'isa ara-pivavahana any Myanmar hatramin'ny firongatry ny hetsika nasionalista hiringiriny tamin'ny taona 2012. Mihamaro hatrany ireo olona manohana ny ideolojia nasionalista Bodista hiringiriny ao amin'ny firenena ary mikendry ny Miozolomana vitsy an'isa sy ny vahoaka Rohingya ao amin'ny media sosialy miaraka amin'ny kabarim-pankahalàna manavakava-bolokoditra.
Nilaza ny Polisy ao Yangon fa hanao fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity izy ireo.